BBC Somali - Warar - Weerarka Qasa oo socda maalintii shanaad
Weerarka Qasa oo socda maalintii shanaad
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 Novermber, 2012, 11:17 GMT 14:17 SGA
Dad reer Israel ah oo degan magaalada Tel Aviv oo ka soo horjeeda weerarka ay Israel ku qaadayso Qasa.
Raiisalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay inuu diyaar u tahay inuu balaariyo howlaha milatari ee looga soo horjeedo Xamaas oo ka talisa Magaalada Qasa, si ay u joojiyaan madaafiicda ay ku soo ridayaan dhulka Israel.
Weerarka cirka ee Qasa ayaa sii socda. Laba dhismo oo ay degan yihiin shaqaale warfaafin ee ajnabi iyo kuwa dalka ayaa xalay ay Israel weerartay, iyadoo ay ku dhaawacmeen dhowr wariyayaal.
Milatariga Israel ayaa sheegay inay beegsanayaan anteenayaal ku xiran dhismayaasha korkooda oo ay isticmaalaan Xamaas.
Wasaarada caafimaadka ee Xamaas, ayaa sheegtay in in ka badan konton qof ay ku dhinteen weerarka Israel. Kala bar dadka dhintay waa dad rayad ah.